Isilimela 27, 2018 admin
Umzuzwana efuna izimvo ezivela kuluntu kwi Bitcoin ETF
I-US Securities and Exchange Commission ufuna izimvo kwi-mali Bitcoin enokubakho exchange wasebenza (ETF).
Izibambiso Umlawuli wabiza izimvo malunga nesindululo esenziwa i CBOE ukudwelisa ukurhweba SolidX Bitcoin ETF, leyo yona esiphakanyiswa VanEck SolidX Bitcoin Trust.
imvuthuluka I CBOE zibonisa ukuba Trust iya imali kuphela kwi Bitcoin kunye nezabelo kwisithuthi iya kubonisa kamva ngobukhulu ixabiso cryptocurrency eli hlabathi. Ngoxa abaqhubi bayo baya kuthenga okanye athengise Bitcoin njengoko kudingeka, “i Trust ayilawulwa ngenkuthalo.”
Umzuzwana ecela izimvo kule utshintsho mthetho ezicetywayo “abantu abanomdla.”
Crypto exchange Ndizimase iceba ukuba umzuzwana nalawulwa nomthengisi-Umthengisi
thetha, a crypto kunye yokutshintsha imali jikelele, wenza nje intshukumo enkulu ukuze ube mvume izibambiso umrhwebi.
Thetha imemezele izicwangciso zalo ukufumana JNK Securities Corp., a obhalisiweyo kumthengisi-umthengisi leyo eye-mvume kuyimfuneko norhwebelwano naziphi cryptocurrencies leyo enokuthi kulawulwa njengoko izibambiso yi Securities and Exchange Commission.
Thetha kuMcebisi Jikelele Ben Sherwin uthe “Sizama ukuhlala phambili, yaye sikholelwa ukuba le ulwalathiso izinto ezihambayo.”
Lightning Network luyakhula kwaye usebenzise ufake beta
Kwiveki ka Juni 25 ibhalwe lweziqalo ezintsha Bitcoin kaThixo Lightning Network, amukeleke ndivuka zontathu Ukusetyenziswa kwalo ukungena beta.
C-umbani, Lightning Network Daemon (LND) kunye Eclair ngokusesikweni wangena release beta ngoMvulo.
Ethetha kwi imbali, C-umbane developer Blockstream uthe ubuchwepheshe ngoku bekuya kuba tye kakhulu kubasebenzisi ekupheleni - leendaba in kukwamkelwa zokuqhuba.
beta Blockstream siquka a nangxowa c-umbane "-olusebenza ngokupheleleyo", kwakunye nokuhambisana loqhakamshelwano ezalathelwe uphuhliso ezisebenza ngapha komsebenzi womnatha TOR.
I Lightning Network iye ikhule kakhulu kwiinyanga ezisixhenxe ukuphunyezwa Bitcoin MAINNET iteknoloji likaThixo liye aphile.
Ekubeni Blockstream liqalise Umbane webstore yayo inikwe ngoJanuwari, inethiwekhi iye zakubona 16,000% ukukhula, ngoku yokuphatha 25 ukuxabiseka BTC kwentlawulo usebenzisa phezu 2560 nodes kanye 7600 imigudu. Ngaphezu, amawaka lamajelo ziyimfihlo yaye ayibonakali manani online.
Abasebenzisi ukhetha ukusebenzisa iteknoloji xa ohlawula kungenelwa amaxesha yokuqinisekisa kufuphi-instant, kunye neentlawulo, nasele baleka ngaphantsi Satoshi eyodwa, unit Bitcoin luncinane okwangoku ixabisa $0.00006220.
Crypto Startup thetha iba mvume US kumthengisi-Umthengisi
Iqonga imali digital Ndizimase ufuna ukuba kumthengisi-nomthengisi kwi US, emva kokuba ezizizwe inkampani ebhalisiweyo ebizwa Securities JNK, ukuba, ngoLwesithathu.
Ngoku Le nkampani iye isicelo Industry Financial Regulatory Authority (FINRA) lokuvuma ukutshintsha ubunini ukuze abe obhalisiweyo kumthengisi-Umthengisi.
Ekugcineni, Ndizimase linethemba lokuba libe nako ukubonelela iqhezu kunye nezinye iinketho stock phantsi izibambiso platform yayo entsha, phantsi kweliso Securities and Exchange Commission (sec) kwaye Tile FINRA Security.
Thetha boss Ben Sherwin wachaza kuthuthelwa CoinDesk: “Siye Ndizuze New York-based umthengisi-umthengisi ukwandisa isiseko sethu imveliso benikela asethi digital ngakumbi kubasebenzisi bethu.”
Ukuba ukufunyanwa ivunyiwe, Thetha unokuqalisa umnikelo iimveliso ezilawulwa kubathengi bayo.
“Zibone ukujoyina FINRA ukuba abe kumthengisi-kumthengisi, kunye lesimo umthengisi-umthengisi ivumela ukuba senze izinto asiyi kuba nako ukwenza ngaphandle kwale mvume. Kwakhona ngokuhambelana mission yethu elubala kunye nokuthembela kuba simhloniphe ngentobeko ummiselo efanelekileyo kwaye olusabelayo oko nabalawuli bathi. »
Ndizimase kamva uceba kwifayile ukuba inkqubo enye trading (ATS) with the sec, kuqhuba.
While JNK and Uphold will operate as two distinct companies until the merger is complete, Uphold intends to bring JNK'S kubasebenzi ukunceda nezicwangciso ukwanda siphakamisa ukuba.
«JNK is an … organization with a 25-year history of being in the financial markets. They’re quality people and good operators … running a broker-dealer requires a certain amount of expertise and the quality of the people there gives us a leg up,»Sherwin uthe.
Ukuhamba yobungcali iza kuhamba enye indlela kakhulu, as Uphold intends to help JNK start offering cryptocurrency research products, on top of the reports it already offers looking at a variety of industries.
«From a process standpoint, baye mvume kwaye sinethemba ukwandisa mvume labo,»Sherwin uthe. «Ngoko kuzuza ukufikelela zazo kwaye ziyazuza ethu yabathengi.»
«Oku kunciphisa overhand yethu ulawuleko yaye sibonisa indlela ngayo regulatory lokongamela thina [ngenxa] Thetha isekelwe phezu elubala kunye nokuthembela,»Waphetha.
Ingxelo Daily Market Kraken for 26.06.2018
$106M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Post Previous:Blockchain News 26.06.2018